Rodin Rakotomanjato : "dila ny 18 oktobra ... tsy hiaritra intsony ny vahoaka" (+vidéo) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Noraisin'ny mpandala ny ara-dalàna hoy toy ny fe-potoana ahafantarana ny momba ny fodian'ny Filoha RAVALOMANANA ny 60 andro nangatahin'ny SADC hanaovana tomban'ezaka mikasika ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. "Manomboka tofoka amin'ny fandrirarirana ny vahoaka" araka ny nambaran'ny solombavam-bahoakan'Arivonimamo teo amin'ny Kianjan'ny Finoana. Ankehitriny ary dia miandry fatratra ny vokatry ny 60 andro ny mpandala ny ara-dalàna ary efa manantena fa ho fantatra alohan'ny 18 oktobra ny teti-andro ho fandaminana ny fiverenan'ny Filoha RAVALOMANANA mianakavy.
Mikasika an'io indrindra no nanomezan'ny Depiopte Rodin fampitandremana ho an'ny FATE. Nambarany mantsy fa tsy afaka hiaritra mihoatra izao intsony ny vahoaka koa "dia hifankahita eto raha mamorona atsanga indray" ny fitondrana hanakanana ny fampiharana ny andininy faha-20 amin'ny tondro zotra. Naverin'ny depiote Rodin fa ny tondro zotra niaraha-nanao sonia no mametraka an-dRajoelina ho filohan'ny tetezamita ka raha toa tsy hampiharina manontolo ny sori-dalàna dia izy no tokony mametra-pialana voalohany.
Ampangain'ny fihetsiny hatrany ny mpanongam-panjakana indrindra amin'izao ambavahaonan'ny firodanany izao. Nandrasana fatratra manko ny fahatongavan'ny iraky ny SADC tarihin'i Simao. Rehefa tsy tonga tamin'ny ora farany kosa izy ireo dia Annick Rajaona, talen'ny fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny FATE, no nanainga faingana nihazo an'i Afrika Atsimo. Inona no dikan'ny fikoropahana ? Samy mandinika ny mety ho valiny ny rehetra . Tsy takona afenina amin'ny rehetra aloha hatreto ny voka-dratsin'ny fanelanelanana nentin'ity dokotera mozambikana ity saingy tombony ho an'ny mpanongam-panjakana te-hibodo toerana. Izany indrindra no efa mametraka sahady ahiahy amin'ny mpandala ny ara-dalàna raha toa ka miverina aminy tanteraka ny fitondrana ny lalao.